DOORASHADA KENYA: Aadan Barre Ducaale iyo Yuusuf Xasan oo xajistay kuraastooda Baarlamaanka Kenya | RBC Radio
DOORASHADA KENYA: Aadan Barre Ducaale iyo Yuusuf Xasan oo xajistay kuraastooda Baarlamaanka Kenya
Posted on August 10, 2017 Raad Raaca, RBC, Wararka
Aadan Barre Ducaale oo la guddoonsiiyay shahaadadiisa guusha doorashada xildhibaanka Gaarisa.
Nairobi (RBC Radio) Hoggaamiyihii hore ee aqlabiyada Baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale iyo Xildhibaanka Kamukunji Yuusuf Xasan ayaa labaduba ku guuleystay inay heystaan kuraastooda baarlamaanka dalka Kenya doorashadii Talaadadii ka dhacday Kenya.
Illaa hadda waxaa socda tirinta natiijada doorrashada codadkii la dhiibtay, hase yeeshee natiijada hordhaca ayaa muujineysa in labada xildhibaan oo ka mid ah kuwa Soomaalida Kenya ugu muuqda laguna yaqaano xagga siyaasadda gudaha ay dib ula soo noqdeen kuraastooda.
AADAN BARRE VS FAARAX MACALIN
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ahaa hogaamiyaha xildhibaanada muxaafidka ee ugu badan baarlamaanka ee xisbiga Jubilee, ayaa isagu kursigan ku fadhiyay illaa 2013.
Doorashadan oo ahayd mid adag ayaa waxaa kursiga kAadan Barre ula tartamay Faarax Macallin oo isagu ka tirsan isbahaysiga mucaaradka, isla markaana horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Kenya.
Labada nin ayaa ku tartamay kursiga baarlamaanka ee Gaarisa.
Aadan Barre ayaa illaa hadda heysta codad gaaraya 22,587 halka Faarax Macallin uu helay 14,897.
Yuusuf Xasan oo la guddoonsiiyay shahaadada guusha xildhibaanka Kamukunji ee Nairobi.
Dhanka kale, Yuusuf Xasan oo bilawgii isreeb reebka doorashooyinka hoose uu qiil qiil galiyay nin u dhashay qowmiyada Kikuyada, ayaa markii danbe xisbigiisa Jubilee u gartay inuu isagu u tartamo kursiga xildhibaanimada degmada Kamukuni ee magaalada Nairobi. Xaafada Islii ee ay Soomaalida ka degto Nairobi, ganacsiyada badanna ku leedahay ayaa ka tirsan degmada Kamukunji, halkaasoo codad badan uu ka helay xildhibaanka.
Doorashada guud waxaa Yuusuf kula tartamay musharixiin dhowr ah, hase yeeshee waxaa ugu muuqday dhanka mucaaradka Ibraahim Axmed ‘Johny’ oo ah musharrax xildhibaan oo dhanka isbahaysiga mucaaradka u tartamay.
Guud ahaan degmooyinka gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ah gobolka Soomaalide deggan tahay, ayaa masuuliyiinta maamulada heer gobol waxaa ku soo baxay musharixiinta xisbiga talada haya ee Jubilee, taasoo ka dhigan in degmooyinka Gaarisa iyo Wajeer oo horey ay u maamulayeen guddoomiyaal ka yimid xisbiyada mucaaradka ay waayeen kuraastooda.
Saddexda degmo ee Gaarisa, Wajeer iyo Mandhera ayaa, sida hadda ka muuqata natiijoyinka hordhaca, waxaa ku soo baxay musharixiinta Jubilee ee kala ah Cali Rooba (Mandhera), Danjire Maxamed Cabdi (Wajeer) iyo Cali Qorane (Gaarisa).